निरु पाल धम्की प्रकरणः तीन सातासम्म पनि अनुसन्धान अपुरो ! | जनदिशा
निरु पाल धम्की प्रकरणः तीन सातासम्म पनि अनुसन्धान अपुरो !
काठमाडौं, ८ भदौ । १५ साउन साँझ ८ बजे नयाँ बानेश्वरको थापागाउँस्थित गल्लीमा सांसद निरुदेवी पाललाई एक अपरिचितले पेस्तोल ताकेर ज्यान मार्न धम्की दिएको खबर सार्वजनिक भयो ।
तेस्रो दिन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी रामदत्त जोशीको संयोजकत्वमा छानबिन टोली पनि गठन भयो । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।
छानबिनको २० दिन बितिसक्दा पनि समितिले कुनै तथ्य सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धान अपुरो हुँदा घटना नै वास्तविक होइन कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ ।
र, घटना वास्तविक नै हो भने र सार्वभौम संसद्को सदस्य तथा सत्तारुढ दलको नेतालाई राजधानीमै कसैले कन्चटमा पेस्तोल ताक्छ र दोषी पक्राउ पर्दैन भने सर्वसाधारणको सुरक्षा पक्कै पनि संकटमा छ ।
Previous Previous post: हवाई यात्रु बिमा १ करोड ७८ लाख
Next Next post: बागमतीमा थपिए एक लाख २९ हजार सवारीसाधन